လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 35
သာသနာ့ နေမင်း ကွယ်လေပြီ ဓမ္မ၀ိဟာရအရှင်၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ ကူးယူတင်ဆက်ပါတယ်၊ မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၃ မန္တလေးမြို့၊မဟာအောင်အောင်မြေမြို့နယ်၊ မစိုးရိမ်တိုက်များ၏ မဟာနာယကချုပ် မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တရာဇဓမ္မာဘိဝံသ (အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ)မထောရ်မြတ်ကြီးသည်၊ ယနေ့ ည ၁၁း ၄၀ခန့် မှာ မစိုးရိမ်းတိုက်သစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘ၀နတ်ထံ ပြန်လွန်တော်မူသွားပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးသည်ကား မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်များ၏ မီးရှုးတန်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်၏ မစိုးရိမ်တိုက်သည် မြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် စာသင်သားသံဃာတော် (၃၀၀၀ )ကျော်စာသင်၊စာချ သာသနာပြုရာ စာသင်သံဃာအများဆုံးစာသင်တိုက်ကြီးဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာပြည်မက ကမ္ဘာအထိတိုင်အောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် မစိုးရိမ်တိုက်၏ ဂုဏ်သတင်းကားမွေးပြန့်လှချေသည်။ ယခုသော်ကား ပရိယတ္တိ ဦးသျှောင် နေမင်းကြီးသည်ကား ကွယ်တော်မူလေပြီး၊ မြန်မာနှင့် သာသနာအတွက် ပြောမပြနိုင်လောက်သော ဆုံးရှုံးမှုကြီးပဲ ဖြစ်ချေတော့၏။ (ဆရာတော်၏ ထေရုပ္ပတ္တိအား ကြည်ညိုပူဇော်ကြရန်...
သန်းဝင်းလှိုင် မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၁၃ မြန်မာ့သမိုင်းတကွေ့၌ ထင်ရှားခဲ့သော ဗြိတိသျှစာရေးဆရာတစ်ဦးမှာ ဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ် ဖြစ်သည်။ သူသည်ထက်မြက်သောစာရေးဆရာတဦးဖြစ်ပြီးအဖိနှိပ်ခံတို့ ဘက်မှရပ်တည်သောစာရေးဆရာလည်းဖြစ်သည်။သူ၏ ပထမဆုံးလုံးချင်းဝတ္ထု ဖြစ်သည့် Burmese Days မှာ ဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ် (George Orwell) စာပေလေ့လာသူတို့ လက်မလွှတ်နိုင်သော စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်သကဲ့သို့ မြန်မာပြည်နောက်ခံဖြင့် နိုင်ငံခြားသားတို့ရေးသားကြသည့် ၀တ္ထုများထဲတွင် အထင်ရှားဆုံးလက်ရာတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်။ ၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် Burmese Days ၀တ္ထုသည် နောက်ပိုင်းသူဆက်ရေးဖြစ်မည့် ၀တ္ထုအတော်များများကို ပုံစံချပေးခဲ့ သော ၀တ္ထုလည်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သော၊ ရိုးဖြောင့်မှန်ကန်မှုမရှိသော လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအတွင်း အံမ၀င်ခွင်မကျ ဖြစ်နေသည့် စာနာစိတ်ရှိသူ၊ မှန်ရာကိုသာလုပ်လိုသူ၊ မတူညီသူများအကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ အထီးကျန်ဖြစ်နေသူတို့အကြောင်း ရေးဖွဲ့ ထားသည့် ၀တ္ထုများဖြစ်သည်။ Burmese Days...
မြ၀တီရဲခေါင် (၁၉ ၂၄ – ၂၀၁၃) ကွယ်လွန်
မြ၀တီရဲခေါင် (၁၉ ၂၄ – ၂၀၁၃) ကွယ်လွန် နာရေးမှတ်တမ်း၊ မတ် ၈၊ ၂၀၁၃ အဘ ဦးသာဆိုင် အမိဒေါ်ရွှေမှတ်တို့၏သား၊ ဒေါ်ခင်လှိုင်၏ ခင်ပွန်း၊ ကိုနေလင်းနှင့် ကိုမိုးကြယ်တို့၏ အဖေ အဘ မြ၀တီ ဦးရဲခေါင်သည် 21/01/1924 ခုနှစ်တွင် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဖျာပုံမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး 06/03/2013 ခုနှစ် အသက် ၈၉ နှစ်အရွယ်တွင် အဆုပ်ကင်ဆာ ရောဂါဖြင့် သြစကြေးလျားနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့ရှိ Aubrun Nursing Home တွင် ယနေ့နေ့လည် 13:15 နာရီတွင် ဘ၀တပါးသို့ ပြောင်းလဲကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ အဘဦးရဲခေါင်သည် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (BIA) နှင့် ဗမာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (BDA) တွင် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်နှင့် ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့ကို တော်လှန်ရေးတွင်...
သန်းဝင်းလှိုင် မတ်လ ၈၊ ၂၀၁၃ ဒေါက်တာဂျွန်အက်ဗင်နီဇာမတ်သည် မင်းတုန်းမင်းတရား၊ သီပေါမင်းတို့နှင့် ရင်းနှီးသော ခရစ်ယာန်ရေဖျန်းဂိုဏ်းမှ သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသည်။ သို့ရာတွင် ဒေါက်တာမတ်သည် ပညာရေးဘက်၌ အထူးအာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်သဖြင့် မြန်မာ့ပညာရေးသမိုင်းနှင့် ပို၍ ဆက်စပ်ထင်ရှားနေပေသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်လည်း ဒေါက်တာမတ်သည် အစအဦးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပညာရေးလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရန် ရေဖျန်းဂိုဏ်းမှ စေလွှတ်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က မင်းညီမင်းသားများနှင့် ပြည်သူအပေါင်းတို့ က ကြည်ညိုလေးစားခြင်းကို ခံခဲ့ရသော ကျောင်းဆရာကြီးဖြစ်သောကြောင့် ဒေါက်တာမတ်ကို မြန်မာတို့က “ဆရာမှတ်ကြီး” ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ ဆရာမှတ်သည် ခရစ် ၁၈၃၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလန်ပြည် လန်ဒန်မြို့၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ၄င်းသည် ယဟူဒီ (ဂျူး) မျိုးရိုး အဆက်အနွယ်မှ...
သန်းဝင်းလှိုင် မတ်လ ၇၊ ၂၀၁၃ ဆရာပါရဂူ မြန်မာပြန်သည့် “သီပေါ၏ မဟေသီ” စာအုပ်သည် လူကြိုက်များ၍ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည်ထုတ်ဝေရသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ယင်းစာအုပ်ကို ဆရာပါရဂူသည် အိပ်ခ်ျဖိလဒင်းဟော (H.Fielding Hall) ရေးသည့် Thibaw’s Queen ကို မြန်မာပြန်ဆို ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဖိလဒင်းဟောသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သီပေါမင်းတရားပါတော်မမူခင်ကပင် ရောက်ရှိနေသည်။ သူ၏စာများအရ သိရသည်မှာ သူသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ မလာမီ အိန္ဒိယ၌ (၆) နှစ်တာမျှ နေခဲ့ဖူးလေသည်။ သူ၏စာများထဲတွင် မကြာခဏ သူ၏အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံပြီး မြန်မာပြည်နှင့် အိန္ဒိယကို နှိုင်းယှဉ်ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ မည်သို့မည်ပုံစတင်ရောက်လာသည်ကို မသိရသော်လည်း အထက်မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသွားခြင်းမှာမူ ဘုံဘေဘားမား သစ်ကုမ္ပဏီအမှုဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ဖြင့် ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်တို့သည် နယ်ချဲ့လိုသောကြောင့်...
လမင်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့ ဖန်မီးအိမ် ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ(တောင်စွန်း)၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၃ ပဉ္စရူပစာအုပ်တိုက်က “စာကိုစီလို့ လွမ်းတော်မူတယ်နှင့် ဆရာတင်မိုး (၆)နှစ်ပြည့် အမှတ်တရပွဲ ” ကို တော်ဝင်နှင်းဆီ ငြိမ်းချမ်းခန်းမမှာ ပြုလုပ်ပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၊ မောင်မိုးသူ၊ ဒါရိုက်တာဝင်းဖေ၊ ဂုဏ်ထူး (ဦး)သိန်းနိုင်၊ ဒေါ်မာမာအေးအစရှိတဲ့ ဆရာတင်မိုးနဲ့ အနေရင်းနှီးသူ၊ ယုံကြည်ချက်တူညီသူ၊ သူ့ကဗျာ သူ့စာကို ချစ်မြတ်နိုး သူတွေ ခန်းမအပြည့် လာရောက်ပေါင်းဆုံကြပါတယ်။ အစီအစဉ်အရ မိမိက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရမှာဖြစ်ပေမယ့် ကားလမ်းပြည့်ကျပ်လို့ နာရီဝက်လောက် အချိန် နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် အမှတ်တရ အဖွင့်အမှာစကားကို ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်က စပြောရတယ်။ မိမိရောက်သွားတော့ ဒုတိယ မြောက်အဖြစ် ဂုဏ်ထူးဦးသိန်းနိုင်က ပြောနေပါပြီ။...
မောင်ရင်ငတေ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၃ ● ပုံတူပန်းချီဆရာမ အေလီဇဘတ် ဗီဂျေး (၁၇၅၅ – ၁၈၄၂) ပန်းချီဆရာမ Louise Élisabeth Vigée Le Brun (Marie Élisabeth Louise) အေလီဇဘတ် ဗီဂျေးကို ၁၇၅၅ ခုနှစ်မှာ ပါရီမြို့၌ ဖခင်ပန်းချီဆရာနဲ့ မိခင်ဆံပင်အလှပြင်သူတို့မှ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူ (၁၇၈၂) ပြင်သစ်သမိုင်းတလျှောက်မှာ ရှာမှရှားလှတဲ့ အမျိုးသမီးထဲက နာမည်ကျော်ကြားနေရာပေးခံရသူ တဦးဖြစ်ပါတယ်၊ ပန်းချီအနုပညာရှင် သူမရဲ့ခေတ် ၁၇ ရာစုအကုန်ပိုင်း ၁၈ ရာစုဦးစမှာ မင်းဆွေ မင်းမျိုး ဂုဏ်သရေရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသူတွေကို ပုံတူရေးဆွဲရာမှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ရှားရှားပါးပါး မိန်းမသား ပုံတူပန်းချီပညာရှင်တဦး ဖြစ်ပါတယ်၊ သူမရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာလည်း ပန်းချီပညာရှင် တဦးဖြစ်ပြီး သူမရဲ့...
အကယ်၍သာ … အရှင်ဥာဏိကာဘိဝံသ (ကာလီဖုိုးနီးယားတက္ကသုိုလ်) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၃ If you can meet with triumph and disaster And treat those two impostors just the same; (Rudyard Kipling) အကယ်၍ အောင်မြင်မှုချမ်းသာနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုဆင်းရဲတွေကို ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ ဒါဟာ လောကဓံ တရားတွေပါလားရယ်လို့ တူညီတဲ့သဘောထား ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်. . . “ကြည့်စမ်းပါ အာနန္ဒာ။ မဟာဓန သူဌေးသားဟာ ကုဋေ (၁၆၀) သောပစ္စည်းဥစ္စာကို ဖြုန်းတီး ပြီး မယားကိုခေါ်ကာ တောင်းရမ်း စားသောက်နေတယ်။ အကယ်၍များ ပထမအရွယ်မှာ စီး ပွားရှာခဲ့မယ်ဆိုရင် သူဟာ...
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ လူငယ်များအတွက် လမ်းညွှန်ချက် သန်းဝင်းလှိုင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၃ ယခုနှစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက် အင်္ဂါနေ့သည် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ၉၈ နှစ် မြောက် မွေးနေ့ဖြစ်သလို (၅၇) နှစ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့လည်းဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကျဆုံးစဉ်က အသက် (၃၂) နှစ် ၅ လ ၆ ရက် သာ ရှိသေးသည်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် ကွယ်လွန်တိမ်းပါးခဲ့ရသော်လည်း မကွယ်လွန်မီဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကား အံ့မခန်းလောက်ဖွယ်ကြီးမားလှပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်သည် နိုင်ငံအတွက် လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာကြီးဖြစ်သလို တပ်မတော်ဖခင်ကြိးလည်း ဖြစ်သည်။ လူငယ်များအတွက် စံပြုအတုယူဖွယ်ကောင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်၏ လူငယ်ဘ၀နှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားသော စာပေများထဲတွင်...
“ကျွန်ုပ်၏ဆံပင်သည် ကျွန်ုပ်၏အမှတ်သင်္ကတ အလံတော်ဖြစ်သည်..” ဟု ခံယူခဲ့သူ တဦးအကြောင်း ငြိမ်းချမ်းအေး ၀၆ ၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၊ ၂၀၁၃ ခင်ဝမ်း (၁၉၄၇-၂၀၀၀) နှင့် ဟယ်ရီလင်း (၁၉၆၂-၂၀၁၃) ကို မင်းမင်းလတ် ၏ ဈာပန (၁၉၉၇) ၌ တွေ့ရစဉ်၊ ဓာတ်ပုံ မျှဝေသူ – သုခမိန်လှိုင် (ကဗျာဆရာ/တေးရေးဆရာ) ငယ်ငယ်က နိုင်ငံတကာ ဘောလုံးပွဲကြည့်ရင် ကွင်းထဲမှာ ဆံပင်ရှည်တလွှားလွှားနဲ့ အားကြိုးမာန်တက် တကွင်းလုံးအနှံ့ ပြေးလွှားကစားတတ်တဲ့ အမေရိကန် အနောက်ပိုင်း သေနတ်ပစ်ကားတွေထဲက “Red Indian” ရုပ်နဲ့ တောင်အမေရိကသားကြီး တိုက်စစ်မှုး ဇာမိုရာနို ကို အားပေးခဲ့တယ်။ ဇာမိုရာနိုဟာ ဘောလုံးကစားရာမှာ စိတ်ဓာတ်ကောင်းရုံတင်မကဘဲ သူ အမြဲဝတ်ဆင် တန်ဖိုးထားတဲ့...
Page 35 of 40«1...3334353637...40»